इंग्ल्यान्डले ३ सय ६१ रन पछ्याउँदा गेलको शतक खेर गयो ! | Hamro Khelkud
इंग्ल्यान्डले ३ सय ६१ रन पछ्याउँदा गेलको शतक खेर गयो !
बिहीबार, फागुन ९, २०७५
एजेन्सी – ओपनर जोसन रोए र जो रुटले सानदार शतक प्रहार गरेपछि वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो वान डे खेलमा इंग्ल्यान्ड ६ विकेटले विजयी भएको छ ।
क्रिस गेलको शतकको मदतले वेस्ट इन्डिजले प्रस्तुत गरेको ३ सय ६१ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले मात्र ४ विकेटको क्षतिमा ८ बल अगाडीनै पूरा गर्यो । इंग्ल्यान्डको जितमा ओपनर जोसन रोएले सानदार शतक प्रहार गरे । रोएले मात्र ८५ बलमा १५ चौका र ३ छक्का प्रहर गर्दै १ सय २३ रन बनाए । त्यस्तै जो रुटले ९७ बलमा ९ चौका प्रहार गर्दै १ सय २ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिए ।
कप्तान इयोन मोर्गनले ६५, जोनी बेयरस्टो ३४ रनमा आउट हुँदा बेन स्टोक्स २० र जस बटलर ४ रनमा अविजित रहे । वेस्ट इन्डिजका लागि जोसन होल्डरले २,ओसन थोमस र देबेन्द्र विशूले समान एक एक विकेट हात पारे ।
त्यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको वेस्ट इन्डिजले क्रिस गेलको शतकमा निर्धातिर ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३ सय ६० रन बनाएको थियो । गेलले १ सय २९ बलमा १२ छक्का र ३ चौका प्रहर गर्दै १ सय ३५ रन बनाएपनि जितको लागि प्रायप्त रहेन । शाई होपले ६४, डरेन ब्राभोले ४०, जोन क्याम्पबेल ३०, शिम्रण हिटमर २०, एशले नर्स २५ र जोसन होल्डरले १६ रन बनाए ।
इंग्ल्यान्डका लागि बेन स्टोक्स,आदिल राशिदले समान तीन-तीन विकेट हात पार्दा क्रिश वोक्सले दुई विकेट लिए । पाँच वान डे खेलमा पाहुना टोली इंग्ल्यान्डले १-० को अग्रता लिएको छ । दोस्रो खेल शुक्रबार हुने छ ।